လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားနှင့်နည်းပြများအတွက်လျှပ်စစ်လေအေးပေးစက်၊ တစ်ကိုယ်ရေပြန်လာသည့်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | တေးရေး
ခေါင်မိုးပေါ်တွင်တိုက်ရိုက် Drive ကို Truck ကားရေခဲသေတ္တာယူနစ်
မီးရထား Transit လေအေးပေးစက်စီးရီး
Mini နှင့် Midi City Bus သို့မဟုတ်ခရီးသွားများအတွက်လေအေးပေးစက် ...
8-12m E-bus အတွက် LMD စီးရီးတစ်ခုတည်းလေကြောင်းပို့ဆောင်သည့်နေရာ
LMD-VI ကို BNDD
လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှု၊ condenser နှင့် evaporator၊ ပေါင်းစပ်ထားသောအပူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်စသည်တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသောဒီဇိုင်းနှင့်ပေါင်းစပ်မှုကိုနားလည်သောအသိဉာဏ်ရှိ modular ပလက်ဖောင်းဒီဇိုင်း (SONGZ SIEMA1 platform) ၇၂% အထိရောက်နိုင်တယ်။
modular 2. condenser အခန်း။
modular 3. ရေငွေ့ပျံအခန်း။
modular 4. လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုအခန်း။
5. Compressor အခန်းတစ်ခန်း modular ။
6. ဘက်ထရီအပူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အခန်းတစ်ခန်း modular ။
လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကား A / C LMD စီးရီး၏နည်းပညာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ -
8.0 ~ 8.8 မီတာ
8.9 ~ 9.4 မီတာ
9.5 ~ 10.4 မီတာ
10.5 ~ 12 မီတာ
၈၀၀၀ m3 / h (၄)
၁၀၀၀၀ m3 / h (၅)
၆၀၀၀ m3 / h (၆)
LMD-III-BNDD နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ LMD-IV-BNDD နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ LMD-V-BNDD နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
၁။ လေအေးပေးစက်၏ input power voltage သည် DC320-DC820V နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်စတင်ပြီးနောက် DC260V ကဲ့သို့နိမ့်ကျနိုင်ပြီး control voltage သည် DC24V (DC20-DC28.8) ဖြစ်သည်။ trolleybus လေအေးပေးစက်၏နည်းပညာအဆင့်အတန်းကို SONGZ နှင့်အထူးအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုလေအေးပေးစက်အမျိုးအစားကိုထိန်းချုပ်သည့်နည်းလမ်းမှာကွဲပြားပြီးနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များရှိ trolleybus ၏ voltage voltage သည်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၄.၁ ။ အားသွင်းထွက်ပေါက်ရေအပူချိန်7ဖြစ်ပါတယ်℃-15℃, အထုတ်လွှင့်ထွက်ပေါက်ရေအပူချိန် 11 ဖြစ်ပါတယ်℃-20℃, Charging ≤ဆေးကြော 10Kw ≤1-3Kw, compressor သည် Panasonic compressor အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
၄.၂ ။ အားသွင်းထွက်ပေါက်ရေအပူချိန်7ဖြစ်ပါတယ်℃-15℃, အထုတ်လွှင့်ထွက်ပေါက်ရေအပူချိန် 11 ဖြစ်ပါတယ်℃-20℃, Charging ≤ဆေးကြော 10Kw ≤1-5Kw, compressor သည် Hitachi compressor ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
၄.၃ ။ အားသွင်း၏ထွက်ပေါက်ရေအပူချိန်7ဖြစ်ပါတယ်℃-15℃, စွန့်ပစ်၏ထွက်ပေါက်ရေအပူချိန် 11 ဖြစ်ပါတယ်℃-20℃, Charging ≤ဆေးကြော 10Kw ≤3-6Kw, အီမာဆန်တွန်းကိုရွေးချယ်သင့်သည်။
LMD စီးရီး E-Bus AC လုပ်ဆောင်ချက်များအဆင့်မြှင့်ခြင်း （Optional）
၁။ အပူလွန်ကဲသောအပူစုပ်စက်အပူပေးစနစ်သည် -15 ကိုသိသည် ℃ တစ်ခုလုံးကိုမော်တော်ယာဉ်များ၏အပူဝန်တွေ့ဆုံရန်နှင့် -25 ℃ စဉ်ဆက်မပြတ်အပူစုပ်စက်စစ်ဆင်ရေး။
၂။ အပူချိန်နိမ့်အပူစုပ်စက်အပူလည်ပတ်မှုသည် ၃ တွင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အပူပေးသည် ℃ အပူချိန်နိမ့်ပတ်ဝန်းကျင်
၃။ အဆင့် ၃၃ တွင်တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုရရှိနိုင်ရန်အဆင့်နှစ်ဆင့်ချုံ့အင်ဂျင်နီယာရှေ့ပြေးပုံစံကိုတီထွင်ခြင်း℃။
၄။ hybrid bus အတွက်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကိုတီထွင်ပါ။ ၎င်းသည်ဘတ်စ်ကားအတွက်လေအေးပေးစက်၏အပူလည်ပတ်မှုကိုသိရှိနိုင်ပြီးယာဉ်ဘက်ထရီအတွက်အအေးပေးစွမ်းသည်၊ ဘက်ထရီလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတိုးစေနိုင်သည်။
၅။ ပေါင်းစပ်ထားသောဘက်ထရီအပူစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်ချက်သည် ၀ ယ်သူ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ 3-10kw ဘက်ထရီကိုအအေးပေးစွမ်းနိုင်သည်။
၆။ လေသန့်ရှင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် ၄ ခုပါ ၀ င်သော - သန့်ရှင်းသောအမှုန့်များစုဆောင်းခြင်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အလင်း၊ အားကောင်းသောအိုင်းဂျင်နရေတာနှင့်ဓာတ်ပုံဓာတ်ကူပစ္စည်းစစ်ထုတ်ခြင်း - ပိုးမွှားသန့်စင်ခြင်း၊
၇။ "Cloud ထိန်းချုပ်မှု" လုပ်ဆောင်ချက်၊ အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်ရောဂါရှာဖွေခြင်းကိုသိရှိနားလည်စေရန်နှင့်ကြီးမားသောဒေတာလျှောက်လွှာများမှတဆင့်ထုတ်ကုန် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစွမ်းရည်များကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
၈။ PTC လျှပ်စစ်အပူသည်ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်အရ PTC ကိုအချိန်မှန်စတင်ပါ၊ အပူပေးသည်နှင့်အပူချိန်အပြည့်အစုံကိုဖော်ပြသည်။
LMD စီးရီး E-Bus A / C နည်းပညာပေါ်လွင်ချက်များ:
၂။ စနစ်တစ်ခုလုံးသည်ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်း၊ အနိမ့်မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းမပါသော condenser၊ ပေါ့ပါးပန်ကာဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကလေအေးပေးစက်ကိုအလေးချိန်နိမ့်သည်။
၃။ EMC ထုတ်ကုန်သည် GB / T 18655 level3၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ system သည်လွတ်လပ်သောဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကာကွယ်မှုဒီဇိုင်းကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင် EU စံနှုန်းများကိုလည်းကျော်ဖြတ်နိုင်သည်။
၄။ လုံခြုံစိတ်ချရသော၊ သုံးဆင့်ပါသောကာကွယ်မှုနှင့်မီးဘေးကာကွယ်ရေးဒီဇိုင်း၊ မြင့်မားသောဗို့အားဆန့်ကျင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်။
5. Adapt အကြိမ်ရေကူးပြောင်းခြင်းနည်းပညာအဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်များသည်တိကျသောထိန်းချုပ်မှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိသောအီလက်ထရောနစ်တိုးချဲ့အဆို့ရှင်တပ်ဆင်ထားသည်။
၆။ CFD ခြင်း simulation technology ကို design ထဲကိုထည့်ပါ။
ရှေ့သို့ Electric Minibus နှင့် Coach များအတွက်လျှပ်စစ်လေအေးပေးစက်
နောက်တစ်ခု: Electric Bus နှင့် Coach များအတွက်လျှပ်စစ်လေအေးပေးစက်, Double Air Return